Haaland oo tijaabada caafimaad u maray Man City – Gool FM
(Manchester) 09 Maajo 2022. Xiddiga reer Norway ee Erling Haaland ayaa soo afjaray murankii ka taagnaa mustaqbalkiisa isaga oo dhamaystiray tillaabadii uu ugu biirayay kooxda Manchester City.
Arintaan waxaa xaqiijiyay Suxufiga dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub lagu qaddariyo ee Fabrizio Romano, wuxuuna shaaca ka qaaday in heshiiska uu bilowday.
Magaca Haaland ayaa dhawaan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid, Barcelona iyo Manchester City, laakiin City ayaa si xoogan u xiiseyneysay saxiixiisa.
Fabrizio Romano ayaa bartiisa rasmiga ah ee “Facebook” wuxuu ku soo qoray: “Haaland waxa uu ku biiri doonaa Manchester City… wax walba waa la isku raacay, warqadahana waa diyaar in la saxiixo.”
Romano ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku daray: “Haaland ayaa maanta oo isniin ah ku soo gaba-gabeeyay dalka Belgium qeybtii ugu horeysay ee baaritaanada caafimaad, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen dhakhaatiirta Manchester City.”
“Wada hadallada si dhab ah ayey u bilowdeen 3 todobaad kahor, waxaana la isku afgartay dhammaan waxyaabihii ka soo baxay, waxa dhimanna waa in la saxiixo qandaraasyada.”
Suxufiga dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yuru lagu qaddariyo ee Fabrizio Romano, ayaa wuxuu xaqiijiyay: “Manchester City waxay u sheegtay dhigeeda Borussia Dortmund, inay bixin doonto Isbuucan qiimaha lagu burburin karo heshiiskiis ee ah 75 million euros.”
Fabrizio Romano oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Ku dhawaaqida rasmiga ah ee heshiiska waxay dhici doontaa Isbuucan, kaddib marka la dhamaystiro heshiiska labada kooxood ee ku saabsanaa bixinta lacagaha lagu burburinayo heshiiska.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri: “Haaland iyo qoyskiisu waxa ay doonayaan in heshiiska lagu dhawaaqo todobaadkan, si ay ugu macsalaameeyaan taageerayaasha Borussia Dortmund sida ugu fiican.”
Fabrizio Romano ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Mushaarka Haaland ee uu kula heshiiyey Manchester City kama badnaan doono kan uu qaato xiddiga reer Belgiam ee Kevin De Bruyne, kaasoo qiimihiisu yahay 375,000 pounds todobaadkii, wuxuuna saxiixi doonaa qandaraas ilaa xagaaga 2027.”
Liverpool, Barcelona & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono horyaallada waa weyn ee Yurub